Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Ny orinasam-pitaterana dia handany bebe kokoa amin'ny teknolojia amin'ny taona ho avy
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
“Vaovao tsara ho an'ny mpamatsy, mpamorona, mpamorona ary mpampiasa vola ny indostrian'ny teknolojia fitsangatsanganana. Ny fanoloran-tena amin'ny fandaniana bebe kokoa amin'ny teknolojia dia famantarana fa manomboka manangana indray ny indostria taorian'ny fiantraikan'ny Covid hatreto.
Hanomboka hampiakatra ny fandaniany teknolojia ny orinasa fitsangatsanganana amin'ny herintaona, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM sy ny hetsika rahavaviny Travel Forward.
Matihanina 700 eo ho eo eran'izao tontolo izao no nandray anjara tamin'ny tatitra momba ny indostrian'ny WTM. Raha nanontaniana momba ny drafitry ny fandaniana ara-teknolojia ho an'ny 2022, dia tsara ny valiny izay efa ho efatra amin'ny folo (39%) milaza fa hitombo ny teti-bolan'izy ireo raha oharina amin'ny telo amin'ny folo (29%) izay mikasa ny handany vola kely kokoa. Maherin’ny iray amin’ny folo (12%) no mbola tsy fantatra mazava ho an’ny taona 2022 raha 21% kosa no hanana tetibola mitovy amin’ny amin’ity taona ity.
Asongadina ihany koa ny halehiben'ny fanovana ny tetibola. Maro amin'ireo matihanina mitovy amin'izany - manodidina ny 15% - no nilaza fa hihena mihoatra ny 10% ny teti-bolan'izy ireo satria ny tetibolany dia hitombo mihoatra ny 10%. Ny fahasamihafana dia voamarika kokoa ho an'ireo izay manantena ny fisondrotan'ny latsaky ny ampahafolony, miaraka amin'ny 15% manantena fihenam-bidy kely raha oharina amin'ny 22% manantena fiakarana kely.
Simon Press, Talen'ny Fampirantiana, WTM London sy Travel Forward: “Vaovao tsara ho an'ny mpamatsy, mpamorona, mpamorona ary mpampiasa vola ny indostrian'ny fitsangatsanganana. Ny fanoloran-tena amin'ny fandaniana bebe kokoa amin'ny teknolojia dia famantarana fa manomboka manangana indray ny indostria taorian'ny fiantraikan'ny Covid hatreto. ”
Nanampy ny gazety fa mpividy 400 mahery nanatrika ny WTM London tamin'ity taona ity sy ny hetsika rahavaviny Travel Forward no naneho fahalianana hiresaka amin'ireo mpamatsy teknolojia. "Ny WTM dia nirehareha foana tamin'ny fanaovana antoka fa rehefa miresaka momba ny mpividy isika dia miresaka momba ny olona manana fahefana handray fanapahan-kevitra sy hanao sonia fifanarahana," hoy izy nanampy.
"Misy teknolojia eny an-tsena ho an'ny tranga rehetra amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana ary matoky izahay fa ny mpividy dia afaka mahita fampirantiana manana, na afaka mamolavola, izay ilainy hanafaingana ny fahasitranany."